स्वास्थ्य जानकारी – Nepali News नेपाली समाचार
"अजम्बरी माया" मा राजशुक्र लिम्बु र सोनु राई (भिडियोसहित)
यौन इच्छा दबाउनु ठीक कि बेठीक ?
एजेन्सी । यौन इच्छा दबाउँदा शारीरिक र मानसिक समस्या देखिन सक्छ । कुनै निश्चित सीमा भित्र रहेर सामाजिक मर्यादाको पालना गर्दै यौन इच्छा बिभिन्न माध्यमबाट पूरा गर्नुपर्छ । पतिमा सम्भोग इच्छा जागेको छ र पत्नीमा जागेको छैन भने समझदारी र धैर्य राख्नुपर्छ । यस्तो अवस्थामा हस्तमैथुन वा अन्य तरिकाले पनि यौन इच्छा पूरा गर्न सकिन्छ >>>
के तपाई सानो-सानो कुरा पनि भुल्नुहुन्छ ? त्यसो भए यसो गर्नुस्
के तपाई सानोसानो कुरा भुल्नुहुन्छ ? कहिल्यै यस्तो भएको छ कि कुनै जरुरी काम नै भुलिएको होस । जसको बिर्सने बानी हुन्छ र पछि कुनै कुरा याद आएमा ओ हो यस्तो जरुरी कुरा भुलेछु भन्ने लाग्छ ? यहाँ यस्तै दिमागको लागि छाहिने महत्वपूर्ण खानाको बारेमा चर्चा हुदैछ जुन खानाले तपाई अल्जाइमरबाट टाढा रहनुहुन्छ साथै दिमागको >>>
बिहान उठ्ने वित्तिकै मनतातो पानीमा मह र कागती मिलाएर खाँदा फाईदै फाईदा
बिहानै कागती पानीमा मह मिसाएर खानाले धेरै फाईदा हुन्छ। जाडो होस या गर्मी मह र कागती सधै खाने गर्नाले हामी स्वस्थ्य रहन्छौ। कोहि अनुहारको छाला राम्रो बनाउन कागती ,पानी र मह पिउँछन् भने कोहि तौल घटाउन कागती मह र पानी पिउँछन्। आँउनुस कागती पानीका फाईदा के के रहेछन् पढ्नुस.. १) खाली पेटमा कागती,मह पानी आधा >>>